Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » IGreat Britain ilungele ukhenketho lwe-boom ngo-2022
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Ukuvulwa kwakhona kohambo phakathi kwe-UK, iYurophu kunye ne-US kuya kunika ithemba lokubuyela kwimeko yezokhenketho- ngakumbi njengoko u-2022 uza kubona ithuba elikhulu lehlabathi lase-UK.
Iindawo ekufikelelwa kuzo, ababoneleli kunye nezinto ezinomtsalane e-UK zimiselwe ukubona ukuchacha okuzinzileyo ngo-2022, ngenxa yokuthanda ukungena kunye nabahlali beeholide basekhaya ukuphonononga i-British Isles, ityhila uphando olukhutshwe namhlanje (ngoMvulo woku-1 kuNovemba) e-WTM yaseLondon.
Malunga neBrits enye kwabathandathu (16%) bathi baceba ukubhukisha indawo yokuhlala ngo-2022-ngaphandle kwemfuno exhaphakileyo yeeholide zangaphandle njengoko uhambo lwaphesheya lunokubuyiselwa ngo-2022-ngelixa abathengi bohambo lwamazwe ngamazwe e-WTM London bezimisele ukutywina izivumelwano zeemveliso zase-UK.
Iziphumo, ezivela kwiNgxelo yoShishino lwe-WTM, ziya kuba lukhuthazo olwamkelekileyo lwababonisi base-UK kwi-WTM yaseLondon, abaya kuba nomdla wokufumana inzuzo ekuthandeni kweekhenkethi zasekhaya kunye nemfuno ye-pent-up yeendwendwe zaphesheya ukuba zibuyele eBrithani.
Amanani avela kuvoto olubini olugunyaziswe yi-WTM yaseLondon - abokuqala babuza abathengi abali-1,000 kwaye bafumanisa ukuba abangama-843 baceba ukuthatha iholide ngo-2022. Malunga nesithandathu (17%) kwaba bathi baza kuthatha indawo yokuhlala.
Uphando lwesibini lwathetha neengcali zorhwebo ze-676 kwaye zafumanisa ukuba ngaphezu kwesiqingatha (58%) banomdla kwinkontileka yeemveliso zase-UK kwi-WTM London 2021, ukuba baya. Ukucazululwa kwamanani kubonise ukuba i-38% 'yayinomdla kakhulu' kwaye i-20% 'yayinomdla'.
Xa ebuzwa malunga neendawo ezithile okanye imimandla, iLondon yayiyeyona idumileyo, kodwa uluhlu olubanzi lwabanye lukhankanywe kwakhona ngabaphenduli, kuquka nezinye iindawo zaseNgilani (ezifana neDevon, iCornwall, iKent neManchester) kunye neSkotlani, i-Ireland neWales.
Uluhlu olubanzi lwababonisi abanomdla kunye neemveliso e-UK ziya kuba se-ExCeL - eLondon kwi-WTM yaseLondon kule veki (ngoMvulo woku-1 ukuya kuLwesithathu we-3 kaNovemba), kuquka nombutho wezokhenketho European Tour Operators' Association; inkampani yokuqesha umqeqeshi iAbbey Travel; IBhunga leSithili sase-Dover, elimele iLizwe le-White Cliffs; iLondon kunye ne-UK ingcali yoKhenketho lweGolden Tours; kunye ne-Merlin Attractions, eneendawo ezininzi e-UK, ezifana ne-Legoland Windsor, i-Alton Towers Resort, i-Warwick Castle, i-Madame Tussauds kunye ne-London Eye.
Uphando lweMerlin Attractions 'lubonisa ukuba abathengi base-US nase-UK bakulungele ukubuyela kwimixholo yepaki "kwimihlambi yabo" ngenxa yento ye-'JOLA' - Uvuyo lokuJonga Phambili.
Emva kweminyaka embalwa enzima, iintsapho kunye namaqela bafuna ukubhukisha ngaphambili ukuze bajonge phambili ekuphumeni kunye nokuchitha ixesha kunye, ngokutsho kwengxilimbela enomtsalane.
Undwendwelo lwaseBritani luqikelele ukuchacha okucothayo okuzayo, kunye nomhlaba omninzi wokubamba emva kweminyaka emibini yohambo olunemiqathango olungephi.
Iqikelela ukuba inkcitho yeendwendwe zaphesheya e-UK ngo-2021 yayizibhiliyoni ezi-5.3 zeedola, xa kuthelekiswa ne-28.4 yeebhiliyoni zeedola ngo-2019.
Umbutho wezorhwebo wangaphakathi e-UKinbound uphembelele abaphathiswa kulo lonke ubhubhane ukuba baqaqambise ingxaki yamalungu ayo, uninzi lwabo lubone ingeniso yehla nge-90% okanye ngaphezulu.
Nangona kunjalo, ukuvulwa kwakhona kohambo phakathi kwe-UK, iYurophu kunye ne-US kuya kunika ithemba lokubuyela kwimeko yezokhenketho- ngakumbi njengoko u-2022 uza kubona ithuba elikhulu lehlabathi lase-UK. Iza kubamba kwaye ibhiyozele iMidlalo yeCommonwealth eBirmingham, uMnyhadala wase-UK ngo-2022 kunye neJubilee yePlatinam kaKumkanikazi.
USimon Press, uMlawuli weMboniso weWTM eLondon, uthe: "Iziphumo zibonisa ukuba kuya kubakho urhwebo olukhawulezayo lwababonisi base-UK e-WTM kulo nyaka - baya kuba nomdla wokuthatha ithuba lomdla ohlaziyiweyo kwikhefu lasekhaya phakathi kwemarike yaseBritane kunye nokwenza. ezona zivumelwano zithe kratya kubathengi bamazwe aphesheya, abazimisele ukuphinda banxibelelane nababoneleli ngeenkonzo emva kokunqumama kweeholide e-UK.